Emmerson Mnangagwa news - latest breaking stories and top headlines - TODAY
Home Topics Emmerson Mnangagwa
The United States has said that it would refuse entry to Zimbabwe's security minister as it voiced alarm over the government's crackdown on protests and the opposition.
Zimbabwean government considers action against arbitrary price hikes by businesses – president
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa said on Friday that his government would be forced to take action against businesses found wantonly increasing prices beyond the reach of the majority of Zimbabweans.
Zimbabwe on Friday slammed a US decision to ban its exports of uncut diamonds, saying claims of the gems being extracted by forced labour at a major mining area had a “political agenda”.
Zimbabwe to introduce new currency in November – official
President Emmerson Mnangagwa has acknowledged the economic hardships Zimbabweans are suffering and pleaded for patience to allow his government to fix the country's rapidly deteriorating economy.
‘Battle for the corpse of Mugabe’ – Former Zimbabwean leader laid to rest in...
After weeks of delays, Zimbabwe's former ruler Robert Mugabe was finally buried over the weekend, closing a battle between the state and his family over the fate of his remains.
Zimbabwe’s Robert Mugabe laid to rest in his rural village
A Zimbabwean former tourism minister was released on bail on Friday after spending two months in jail over the disappearance of $94m from the country's pension fund, the state broadcaster reported.
Zimbabwe has announced that former president Robert Mugabe would be buried at his home village in Zvimba as requested by his family, after three weeks of public debates over his final resting place.